Ukuphupha i-Shoe polisher Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kuluntu lwanamhlanje olulahlayo, ipolishi yezihlangu iphulukene nokubaluleka kwayo. Namhlanje, izihlangu zingaphezulu kwezinto ezincedisayo zefashoni kwaye azinxitywanga kakhulu kunangaphambili. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka unxibe ngokuhambelana nefashoni yangoku.
Kananjalo, izihlangu ezininzi ziye zanexabiso eliphantsi kangangokuba kunokwenzeka ukuba ziphoswe kude kunokuba zinakekelwe kwaye zilungiselelwe ubomi obude. Ukongeza kwesikhumba, ngoku kukho inani lezinye izinto kwicandelo lezihlangu ezingasenakuphathwa ngebhitumene.
Kodwa kutheni ngoku siphupha ipolishi yezihlangu? Ngaba lo ngumyalezo nje ovela kwi-subconscious yokuba kufuneka sicoce kwaye sizikhathalele izihlangu zethu kwakhona? Okanye ngaba kukho enye into efihliweyo kweli phupha?
1 Uphawu lwephupha «isihlangu esikhanyayo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isihlangu esikhanyayo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isihlangu esikhanyayo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isihlangu esikhanyayo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ubona kwisimboli «isihlangu sePolish» uphawu lwe Jonga kwi. Umntu ophuphayo angavuya el mundo ukuvuka, kuba impumelelo yabo iyabonwa kwaye ivuzwa ngabanye abantu. Oku kuyakunceda ukuphucula umfanekiso wakho kwaye kukuvumela ukuba unyuke uye eluntwini.
Ukhathalelo lwezihlangu njengokulala nako kunokuchaphazela Ukucima bonisa ubudlelwane. Oku kunokuba ngumanyano lwakho okanye obunye ubudlelwane phakathi kwabantu, njengomhlobo. Isizathu sokupheliswa kukudana kakhulu kulindelo ngokunxulumene nolunye.
Ukuba ucoceka izihlangu ephupheni lakho emva koko uzipolishe ngepolishi yezihlangu, uyayifuna ukucoca ngaphakathi. Kungenxa yokuba oleleyo unoluvo lokuba unokuzibonakalisa kwindawo yakhe kwindawo ekhethekileyo xa sele esusile isiphene sakhe. Ukuba umenzi wezihlangu uhlamba izihlangu ngamadlozi ukuze zikhanye kakhulu ephupheni, lowo uleleyo kufuneka aqonde ukuba kungekudala uza kujongana nezinto ezingathandekiyo kwihlabathi elivukayo.
Uhlalutyo lokulala ngokubanzi, kubalulekile ukuba ngowuphi umbala osetyenziswa kwipolish yezihlangu ephupheni. Kungenxa yokuba ezinye izikhombisi zinokufunyanwa koku. Uhlobo lweembadada oluphathwa nge-cream polish yezihlangu ephupheni nazo zinokuba ngumdla ekutolikeni. Kule meko, iibhutsi njengophawu lokuphupha zibhekisa, umzekelo, enkulu. Uzinzoebaluleke kakhulu kumphuphi ebomini bakho. Izihlangu zabasetyhini zinokubonwa njengokubonisa iimfuno ezingaqhelekanga.
Uphawu lwephupha «isihlangu esikhanyayo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, ipolishi yezihlangu yenzelwe ephupheni elifana "nokhilimu". Kungenxa yokuba nakulo mfanekiso unjengephupha umnqweno wokuphupha unokuba uwedwa ukuqonda umboniso. Ukufezekisa le ndumasi, naluphi na uncedo kwihlabathi elivukayo lamkelekile kuye.
Ukuba umphuphi uphatha ibhegi enegrisi ekhethekileyo ngelixa ulele ukuyenza ibenye kwakhona okanye ukususa amabala kunye neempawu zokunxiba, uya kuhlala efumana isicelo sokuba angashiyi ilizwe lokwenza iwotshi. Ngaphandle khazimla. Kuya kufuneka ujonge ngasemva kwe-facade yezinto okanye yabantu rhoqo.
Ukufaka igrisi yesikhumba kwibhatyi yesikhumba okanye efanayo ephupheni kunokubonisa ukuba lowo uleleyo ubakhathalele abanye abantu kucace Ndingathanda. Ufuna ukubonisa abantu abathile kuphela okuhle ebomini bokuvuka.
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, ukutolikwa kwesimboli yamaphupha "ipolishi yezihlangu" njengoko isetyenzisiwe ngexesha lokulala nako kunganomdla. Umzekelo, ukhe wasebenzisa ilaphu elidala okanye iikawusi? Okanye ngaba le khrim ibithanjiswe ngebrashi?
Uphawu lwephupha «isihlangu esikhanyayo» - ukutolika kokomoya
Ngokokuhlalutya okungaphaya kwamaphupha, nabani na okhathalela ipolishi yezihlangu ephupheni lakhe unamathela ekubalulekeni kwakhe. unxibelelwano Ukuhla uye emhlabeni, njengoko unokufumana amandla okomoya kuwo.